‘डन्डीफोर आउँदा खुसी लाग्यो’: एकनारायण भण्डारी - Prathana Media
‘डन्डीफोर आउँदा खुसी लाग्यो’: एकनारायण भण्डारी
स्कुल जाँदा घरबाटै काँचो आँपको अचार र गहुँको रोटी लगिन्थ्यो, स्कुलमै खाइन्थ्यो । फर्कंदा ऐंसेलुका झ्याङ चहार्दै हिँडिन्थ्यो । गाउँलेका बारीमा फलेका काँक्रा नचोरी चित्तै बुझ्दैनथ्यो
निम्नमध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्किएको हुनाले घाँस, दाउरा, मेलापर्म गर्नैपथ्र्यो । मलाई स्मरण छ कि, १५÷१६ वर्षकै उमेरमा मैले आफ्नो घरको छानो आफैंले हालेको थिएँ । क्रमशः उमेरसँगै रहर पनि बढे । गाउँमै खुम्चिएर बस्न मन लाग्न छाड्यो । बा–आमा मलाई धेरै पढाउन चाहनुहुन्थ्यो । तर परिस्थिति कठिन थियो । मलाईचाहिँ पढ्न मन नलाग्ने हुँदै गयो ।
यद्यपि, स्कुल पढ्दाका केही अनुभूति रोचक छन् । गर्मीयाममा बिहान स्कुल लाग्थ्यो । स्कुल जाँदा घरबाटै काँचो आँपको अचार र गहुँको रोटी लगिन्थ्यो, स्कुलमै खाइन्थ्यो । फर्कंदा ऐंसेलुका झ्याङ चहार्दै हिँडिन्थ्यो । गाउँलेका बारीमा फलेका काँक्रा नचोरी चित्तै बुझ्दैनथ्यो । काँक्रो चोरेर भाग्दा थुप्रै जोर चप्पल चँुडिए । कहिलेकाहीँ स्कुलबाट भागेर सिम्ले खोलामा पौडी खेल्न गइन्थ्यो । त्यो दिन सम्झदा निकै रोचक लाग्छ अहिले । गाउँमा पानीको अभाव थियो । स्कुल गएका बेला तिर्खा लाग्यो भने धारामा गएर आधा घण्टा जति नै लाइन बस्नुपथ्र्यो । त्योबेला पानी पिउन गरेको संघर्ष सम्झँदा अहिले पनि मन कटक्क खान्छ ।
सानो, सुरिलो बाँस देख्यो कि काटिहाल्न मन लाग्ने । छाताको टुप्पोले बाँसमा प्वाल पारेर, भक्को चप्पल वा गुदरगानोले प्वाँल टालेर बाँसुरी बनाउथे
लेखनसँगै गीतसंगीतमा रुचि- त्यतिबेला हरेक शुक्रबार स्कुलमा अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थ्यो । विभिन्न कार्यक्रम हुन्थे । जसमा म सहभागी हुन्थेँ । निबन्ध तथा कविता लेखन प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्थें । प्रतिस्पर्धाले मान्छेलाई तिखार्दो रहेछ । क्रमशः राम्रा गीत कविता लेख्न थालेँ ।
‘कसैले तेरो छोराले के गर्छ भनेर सोध्दा तास खेल्छ भनौं कि पढ्छ भनौं ? केटा !’ म एकछिन चुप बसेँ । बाले फेरि सोध्नुभो, ‘तास खेल्छस् भने तासै किन्दिन्छु, पढ्न पाउँदैनस्, पढ्छस् भने जे नि गर्दिन्छु, तास खेल्न छाड् ।’ मैले निकै विचार गरेर जवाफ दिएँ, ‘पढ्छु, तर सहर गएर ।’
लुकी–लुकी तास खेल्दा– आठ कक्षा पढ्दाताकाको कुरा हो । साथीसंगतले तास खेल्न सिकें । छिटै नै तासको लत लागिहालेछ । बाआमासँग लुकेर जुनेली रातमा रातभर नै बारीको कान्लामुनि बसेर तास खेलेको स्मरण ताजै छ । एकदिन बाले त्यसरी तास खेलेको थाहा पाउनुभएछ । म खुब डराएँ, बाले बेस्मारी पिट्नुहुन्छ भनेर । तर उहाँले पिट्नु भएन । शान्त भएर सोध्नुभो, ‘कसैले तेरो छोराले के गर्छ भनेर सोध्दा तास खेल्छ भनौं कि पढ्छ भनौं ? केटा !’ म एकछिन चुप बसेँ । बाले फेरि सोध्नुभो, ‘तास खेल्छस् भने तासै किन्दिन्छु, पढ्न पाउँदैनस्, पढ्छस् भने जे नि गर्दिन्छु, तास खेल्न छाड् ।’ मैले निकै विचार गरेर जवाफ दिएँ, ‘पढ्छु, तर सहर गएर ।’
पहिलो गीत रेकर्ड– एकदिन घरभन्दा अलिमाथिको जंगलस्थित चौतारोमा बसेर होमवर्क गर्दै थिएँ । म होमवर्क गर्न र विभिन्न रचना गर्न त्यहीं जान्थेँ । मैले विवाह गरेर चेलीलाई माइतबाट घर ल्याउँदै गरेको देखेँ । त्यो दृश्यले मन छोयो । अनि त्यतिबेलै लेखें, ‘देउरालीमा हावा’ बोलको गीत । जुन गीत पछि रेकर्ड भयो । मैले लेखेको पहिलो रेकर्डेड गीत पनि त्यही हो । किशोरावस्थामा नै मैले सिर्जनाको पाइला अघि बढाएको थिएँ ।
मन परेकी केटीसँग छुट्दा रोइयो– किशोरावस्थामा धेरै साथी बने, छुटे । केटी साथी पनि बनाइयो । मन परेकी केटीसँग छुटिँदा रुँदै पनि हिँडेको छु । तर, मैले उनलाई मन पराउँछु भन्नै सकिनँ । किनकि, आमाले ‘रक्सी खाने र लभ गर्ने काम नगर’ भन्नु भएको थियो । बा–आमाको इज्जतको ख्याल गरेरै प्रस्ताव राखिनँ । तर पनि उनीसित छुटिँदा खुब पिर पर्यो ।
म अलि बढी नै लजालु स्वभावको थिएँ । जुँगाको रेखी बस्दा रुमालले मुख छोपेर हिँडे मान्छेहरूले खिसी गर्छन् भनेर । पछि जुँगा काटेँ, झन् लाज लाग्यो । तर डन्डीफोर आउँदा चाहिँ खुसी लाग्यो । ममा पनि बैंश आयो भनेर । अहिले सम्झँदा पो रमाइलो लाग्छ । किशोरावस्थामा नै धेरै कुरा पाएँ, धेरै कुरा छुटे । तर गीतसंगीतप्रतिको प्रेम भने झन् बढ्दै गयो । र, अहिले यो ठाउँमा छु ।
याे साहित्य हामिले सामप्ताहिकबाट साभार गरेका हाैँ । यसका लेखक राधिका अधिकारी हुन् ।